Agaasimihii Warfaafinta Madaxtooyada Soomaliya oo Xilka Laga Qaaday – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Agaasimihii Warfaafinta Madaxtooyada Soomaliya oo Xilka Laga Qaaday
Warar lagu kalsoonan karo oo ay halayso idaacadda Simba ayaa ku waramaya in Agaasimihii Warfaafinta Madaxtooyada Shador Xaaji Maxamuud oo ka mid ahaa raggii aadka ugu dhowaa Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud xilka laga qaaday islamarkaana la magacaabay agaasime Cusub.
Talaabada xilka loogu qaaday Agaasimihii Warfaafinta Madaxtooyada Shador Xaaji Maxamuud ayaa la sheegay in laga soo soo saaray xafiiska Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Agaasimaha cusub ee Warfaafinta Madaxweynaha ayaa loo magacaabay Cabdinuur Maxamed Axmed oo ah nin dhalinyaro ah, kana mid ahaa raggii qeybta weyn ka qaatay ololihiisa dhinaca warbaahinta iyo mida baraha bulshada ee Madaxweynaha Cusub ee Soomaliya Maxamed C/laahi maxamed(Farmaajo) oo 8-dii Bishii Februay ku guuleystay Xilka Madaxweynaha Soomaliya kadib doorasho ka dhacday magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa isbadalo ku sameynaya maamulka Madaxtooyadda Soomaliya,waxa jira mas’uuliyiin kale oo lagu wado in xilalka laga qaado mudooyinka soo socda.
Dhanka kale waxaa booskii uu ka tagay Siyaad Maxamuud Shire oo ahaa Madaxa Protocol-ka ama Hab maamuuska Madaxtooyada ayaa waxaa lagu bedelay nin cusub oo lagu magacaabo Mudane C/llaahi Yuusuf.